06/02/2018 - Page 5 sur 5 -
Hery Rajaonarimampianina : « Tokony hiova ny endriky ny toe-tsaina eto amin’ny firenena »
06/02/2018 admintriatra 0
Tsy ampihambahambana no nanambaran’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nanoloana ny mpanao gazety omaly, teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, fa tokony hiova ny toe-tsaina fa tsy ny endriky ny tanàna sy ny endriky ny firenena ihany. “Tokony hiova, …Tohiny
Tamin’ny volana jona 2017 ny lanonam-pahafantarana ny fanombohan’ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato, ilay antsoina hoe Ravinala Airports. Valo volana aty aoriana, tontosa hatramin’ny 25% ny asa fanitarana sy fananganana ilay fotodrafitrasa goavana ho …Tohiny
Hiresaka tranga heverina ho kely tsy dia misy dikany isika androany kanefa tena taratry ny fomba fisainan’ny sasan-tsasany amitsika Malagasy ary azo ambara ho fototry ny fitarazohan’ny fampandrosoana mba tsy hilazana hoe sakana mihitsy aza. …Tohiny
Nanamarika ny faha-71 taonan’ny tolom-panafahan’ny Malagasy tia tanindrazana tany Moramanga ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny vadiny, omaly. Andro izay natokana hanamarihana ny hetsika “29 marsa 1947”. Tamin’izany indrindra no nanambaran’ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara fa ...Tohiny
Ady amin’ny Pesta : Nanentana fanadiovana tamin’ny asa tana-maro ny tanora HVM